Blog Reader: [ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်]2New Entries: အချစ်စိတ်..
အမှတ်တရ ကဗျာအရှည်ကြီး တစ်ပုဒ်စပ်လိုက်ပါတယ်.. ဖတ်ရတာမောသွားခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်.. အပျော်လေးပေါ့... ခေါင်းစဉ်နေရာမှာ တွေးချင်တာပြောင်းပြီး တွေးကြည့်နိုင်တယ်နော်..!! ဗိုက်ဗိုက်ဆာတာတို့..! ဗိုက်ဗိုက်နာတာတို့..! ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ တစ်ခုခုကို မျှော်လင့် တောင့်တနေတဲ့စိတ်တို့..! ဘာညာကွိကွပေါ့နော့.... အယ့်.... ကြည့်.... လျှောက်တွေးမနေနဲ့ဦးလေ.. (မီးတွေမှန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတာမျိုးကိုပြောတာပါ..) အဟက်.. ဟက်...!! :P :P
သျှပ်မှူးကျော် ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်နဲ့ ကျမတို့အားလုံးချစ်သော ကိုထူးအိမ်သင် ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ... ဖတ်ဖတ်ချင်း ရင်ထဲကို ရောက်သွားခဲ့တဲ့ ကျွန်မ နှစ်သက်လွန်းတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်အဖြစ် ဖော်ပြပါရစေ... သစ္စာရယ် မြတ်နိုးခြင်းရယ် ခိုင်မြဲချိန်မှာ အိပ်မက်လေးတစ်ခုဟာ အသက်ပါပဲ.... ယုံကြည်တယ် မဟုတ်လားဟင်..!! ခံစားကြည့်ပေးပါလား..!!
... အသက်သည် အိပ်မက် ...
ဆရာမကြီး ကြည်အေးရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေထဲက နှစ်သက်ရတဲ့ အချစ်ကဗျာကောင်း တစ်ပုဒ်ပါ... သိပြီးသား ဖတ်ပြီးသားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ကဗျာထဲက ကောင်မလေးရင်မှာ ဘာတွေကိုများ စိုးရိမ်လို့ နေပါလိမ့်..!! ထပ်ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦးနော်...!!
နှမ မသိရှိမည်လား ။
ခံစားချက်နှင့် ထပ်တူကျသော ဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ရဲ့ ကဗျာလေးပါ... ကဗျာလေးက ပူလောင်မှုတွေနဲ့ လောင်ကျွမ်းရင်း အေးချမ်းလို့နေပါတယ်... ကျွန်မသည်လည်း သူ့ကို မာနမဲ့စွာ အင်မတန်မှ မြတ်နိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်....
မည်သည့်အခါမျှ မေ့လျော့၍ မရနိုင်ပါလေ...
တီတီငယ် ရဖူးရဖူး ရေးပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ညီမလေး မက်မက် က Tag ထားတဲ့ Tag Post လေးပါ.. နောက်ထပ် ကျွန်မတို့ရဲ့ အကြွေးရှင်များကတော့... မမဝါဝါခိုင်မင်း.. ကိုဟန်သစ်ငြိမ်... ကိုအိပ်မက်ရှင်... နဲ့ ဖိုးဂျယ်လေး... တို့ပါ... ကျေးဇူးပြု၍ သီးခံစောင့်ပေးပါဦးနော်...!!
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://koyinnawkhinlaynge.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.